Bogga ugu weyn DataNumen Partners
At DataNumen, Waxaan raadineynaa oo aan soo dhaweyneynaa iskaashiyada si aan u balaarino gaaritaanka suuqa isla markaana aan macaamiisheena ugu soo bandhigno dhameystir dheeri ahtary badeecadaha iyo adeegyada kor u qaada maalgashigooda iyo khibradooda DataNumen.
Waxaan u heellan nahay ilo dhaqaale barnaamijyadeenna istaraatiijiyadeed ee istiraatiijiyadaysan; oo ay ku jiraan tababarka, suuqgeynta, adeegyada xirfadeed iyo taageerada horumarka.
Noocyada DataNumen Barnaamijyada Iskaashatada
Barnaamijka Iskaashatada Xalka Ganacsiga
Wada-hawlgalayaasha xalka shirkadaha ayaa fure u ah DataNumenWaxqabadyada si loo kordhiyo gaadhista xalalka shirkadaha. DataNumen iyo la-hawlgalayaasheeda waxay bixiyaan ilaha iyo ururada khibrada leh ee ubaahan inay yareeyaan luminta masiibada xogta, kordhinta waxqabadka hawlgalka, iyo hagaajinta khibrada macaamiishooda.
Barnaamijka iskaashiga ayaa fursad weyn kuu ah inaad lacag ku kasbato iibinta alaabteenna soo kabashada xogta. Haddii aad leedahay ama aad maamusho degel internet, waad ka qayb geli kartaa barnaamijkeenna ku xiran. Waxaan soo dhaweyneynaa qof kasta, laga bilaabo dadka dayactiraya bog yar oo shaqsiyeed joornaallada, bogagga, iyo dukaamada.
DataNumen waxay siisaa fursad iibiyaasha inay soo saaraan dakhli dheeraad ah iyagoo ku biiraya DataNumen Barnaamijka Iskaashatada Iibiyaha. Nidaamka diiwaangelinta oo fudud ayaa kuu oggolaan doonta inaad ka mid noqotid kuwa adduunka ugu weyn iyo most barnaamijka iibiye soosaara soosaarista xogta guuleysta.
Ku beddelashada xiriiriyeyaasha websaydhyada kale ee la xiriira waa hab fiican oo loo abuuro xiisaha iyo taraafikada boggaaga. Marka laga reebo booqdayaasha toos ugu soo haajiraya goobtaada ee ka imanaya wada-hawlgalayaasha isku-dhaafsiga isku-xidhka, faa iidada taraafikada mashiinka raadinta ee sii kordheysa ee la helo iyadoo websaydhkaagu ku dhex xoqan yahay isku-xirnaanta ayaa sidoo kale noqon kara mid weyn.